Izindaba - Yini okufanele siyinake emahlombe ethu?
Yini okufanele sinake emahlombe ethu?
Intamo e-scapular iyinto yokuhamba ebalulekile yomzimba womuntu. Asikwazi ukusebenza nokuphumula ngaphandle kwawo nsuku zonke. Njengenye yamajoyinti abalulekile omzimba womuntu, ihlombe lihamba cishe sonke isikhathi. Impilo yayo inquma ngqo ikhwalithi yempilo nekhwalithi yempilo yomuntu. Usebenzisa okuhleIhlombe Braceingagcina futhi isheshise ukutakula. Kuyazuzisa ukuthwala ihlombe.
Ukuxhaswa Kwamahlombeumvikeli usetshenziswa kabanzi. Imvamisa singabona asebekhulile, abagijimi besebenzisa izivikeli zamahlombe, nezinhlobo ezahlukahlukene zeziguli zamahlombe, ikakhulukazi isifo samathambo kanye neziguli zomlomo wesibeletho ezidinga izivikeli zamahlombe ukuvikela amalunga.
Ukwesekwa kwamahlombe kunganikeza ukusekelwa, ukuzinza, ukulondolozwa kokushisa nokuqeda izinhlungu ezicutshini ezizungezile zokuhlangana kwehlombe. Kuyafaneleka ngobuhlungu obunzima nokuhlala njalo nokuvuvukala okubangelwa izilonda eziwohlokayo zokulimala kwamahlombe okuhlangene kanye nokulimala kwezicubu ezithambile, kanye nokuxoshwa kwehlombe okubangelwa yi-hemiplegia. Inganikeza ukwesekwa, ukuzinza, ukulondolozwa kokushisa nokuqedwa kobuhlungu ezicubu zomzimba ezihlangene zamahlombe. Kuyafaneleka ngobuhlungu obunzima nokuhlala njalo nokuvuvukala okubangelwa izilonda eziwohlokayo zokulimala kwamahlombe okuhlangene kanye nokulimala kwezicubu ezithambile, kanye nokuxoshwa kwehlombe okubangelwa yi-hemiplegia. Akudingeki nje kuphela ukuthi sidinge ukwesekwa ehlombe ukuze sifudumale ebusika, kepha nakulezi ziguli, ehlobo elijulukile, ngenxa yokufinyelela njalo endaweni enesiphephetha-moya, sidinga nesibopho esilinganayo sehlombe ukunciphisa umthwalo ohlangene. Imvamisa, izinto ezisetshenziselwa ukuxhaswa emahlombe ezimakethe zingukotini, uboya, isikhumba nezinto ezihlanganisiwe. Ukotini: uphefumula futhi ucoceke, kepha kulula ukushwabana ngemuva kokuwasha nokugqoka. Izinga lokuncipha likhulu kakhulu, cishe ngo-4-10%. Ukulondolozwa kokushisa kuvamile, akubekezeleli isikhunta. Uboya: Izinto zokwesekwa zendwangu ejwayelekile yoboya bezinwele ngoboya, izinwele zonogwaja nezinwele zamakamela, njll. Kunokugcinwa okuphezulu kwemfudumalo, kepha ukungena kwawo emoyeni kuyaphambuka. Akufanele ukusabalalisa ngemuva kokujuluka, futhi impahla yayo efakazela izinambuzane ayiyinhle. Iphinde inikeze abantu umuzwa wakudala futhi womile ngemuva kokusebenzisa isikhathi esithile. Isikhumba: Isikhumba sezilwane siphefumula kalula, sifudumele, kepha simelana namanzi; ubuso besikhumba bokufakelwa abesabi ubumanzi, kepha buphansi ekufudumaleni nasekungeneni komoya.